Izindawo zokubuka e-Rustenburg nezindawo ezungezile
I-Rustenburg esifundazweni saseNorth West eNingizimu Afrika, iseduze neGoli nasePitoli. I-Rustenburg iyinqaba yokuzijabulisa, eliseduzane ne-Sun City resort. Leli dolobha linomgodi omkhulu kunawo wonke ePlatinum emhlabeni. Ibuye ihloniphe indawo enhle namagugu amasiko.
ERustenburg, esifundazweni saseNorth West, eNingizimu Afrika
I-Rustenburg isenyakatho-ntshonalanga yeGoli, ngaphansi kwezintaba zaseMagaliesberg endaweni engenawo i-malaria. Ngenye yezindawo ezindala kakhulu futhi ezikhangayo kule ndawo futhi ngezinye izikhathi zibizwa ngokuthi iPlatinum City.
Idolobha elisifundazweni saseNorthwest wesifundazwe yindawo yokuphunyuka kwabakhileyo eGauteng iminyaka eminingi, ihora elilodwa nje. Izivakashi zingakujabulela eRustenburg Ramble enezindawo eziningi zobuciko, izigcawu zasemapulazini kanye nezitolo zokudla endleleni. I-Waterfall Mall yindawo yokuthenga e-Rustenburg.
Kunezindawo eziningi ezikhangayo eRustenburg nasezindaweni ezizungezile ezinezinhlobo eziningi zemvelo nemidlalo yokuvakashela. Izivakashi zingabona izinhlobo ezingu-13 ze-antelope ezihlanganisa i-Oribi, iKudu ne-Sable Antilope kanye nezinhlobo eziningi zezinyoni e-Rustenburg Nature Reserve. Futhi kule ndawo yi-Kgaswane Mountain Reserve, ipikinikini enkulu kanye nokuhamba ngezinyawo ngemigwaqo yokuzimela emigwaqweni yokubheka kanye nokubuka amasayithi. Izindawo zepikiniki zinamasayithi e-barbeque nawo.
I-Lost City inamandla kakhulu futhi iyingqayizivele, isimanga sezakhiwo esakhiwe emasimini amahle ase-botanic namahlathi. Le nkosikazi yefantasti yendabuko ihlangene ne-parked water park, Valley of the Waves kanye neBridge Bridge of Time. I-Sun City isebenza ngezindlela ezihlukahlukene zokuzijabulisa kwangaphandle kanye nokushayela umdlalo ku-malariya mahhala i-Pilanesberg Game Reserve ne-National Park.
I-Pilanesberg iyisiteji sesine esikhulu kunazo zonke epaki yase-Afrika Eningizimu nezilwane eziyi-10 000 ezithakazelisayo kufaka phakathi umdlalo we-Big Five. Ipaki iqukethe umshini wokushisa i-volcanic unyaka wezigidi eziyi-1200 wezigidi ezidlule - enye yezingu-3 kuphela emhlabeni.
Izindawo ezithakazelisayo eziseduze naseRustenburg, eNingizimu Afrika
Ezungezwe yiNtaba yeMantshi yaseMagaliesberg, iDamu laseHartebeespoort yiyona indawo yokuvakasha eholide ehlinzeka ngemisebenzi ehlukahlukene yezemidlalo, imisebenzi yemidlalo yamanzi nemidlalo. Ezinye izindawo ezikhangayo zihlanganisa i-aquarium, i-zoo yangasese, i-snake park kanye ne-cableway.
I-Magaliesburg Village idolobhana elimnandi nelomlando elizungezile elinemvelo, nemigodi nemifula yamasiko. Eminye izakhiwo eziluhlaza eziphahleni zibuyela emuva kuma-1800. Izivakashi zizothola izindawo zokuhlala zezwe, ezitolo, ubuciko kanye nemikhumbi yokusebenza. Kule ndawo kukhona iMayini ye-Blaaubank Historical Gold, enye yamandulo endala isebenza.
I-Sun City Resort Complex yiyona "Vegas" yaseNingizimu Afrika, indawo yokuzijabulisa nokuzijabulisa kuwo wonke umuntu. I-Sun City inezindawo eziningi zokungcebeleka nezemidlalo kanye nezindawo ezivelele zemiboniso ekhazimulayo. Izivakashi zingakhetha ezihlukahlukene zokudla kanye nezitolo zokudla noma inkantolokazi inhlanhla kuma-casinos. Ukuze uzungeze indawo yokubhuka kukhona i-Sky Train eyeka ezindaweni ezahlukene ngaphakathi kwinkimbinkimbi.
Izindawo zokuvakashela zaseRustenburg
Impophoma yokuthenga i-Mall neRustenburg Ramble
I-Rustenburg Museum eHholo LaseDolobheni
Izakhiwo zomlando, amasonto, izikhumbuzo nezindlu
Imvelo Yemvelo - eRustenburg, Kgaswane, Vaalkop, Borakalalo
I-Hartebeespoort Idamu elikhangayo
I-Maropeng, i-Cradle of Humankind, Indawo yeGugu loMhlaba
I-Wildt Cheetah ne-Wildlife Centre
I-Rhino ne-Lion Nature Reserve
I-snake nepaki yezilwane
Izindawo zokudlela, amathilomu, ama-pubs
Izwe neWest Saloon
I-Market Welwitschia Country
Iwayini le-Citrus ne-liqueur ukunambitha
Uhambo lokudla ushizi, indawo yokudlela kanye nama-picnics
Izitolo zobuciko nobuciko
Ukubuka nokujabulela ukuvakasha kwezwe
Uhambo lwezimayini zeMigodi yegolide lweBalaaubank
Imigwaqo yamahhashi nezintaba
Izinkambo zokuhamba, imigqa yezip, ukuyeka
I-Quad ngebhayisikili ne-paintball - I-Hekpoort Valley
I-Sun City ne-Lost City ezikhangayo
Izakhiwo zangaphandle zokuzilibazisa nezemidlalo zonyaka wonke
Izifundo ezimbili zegalufu ezingu-18 zeGolf kanye ne-Gary Player Country Club
Amabhodlela, izindawo zokudlela, inkantolo yokudla, amathilomu, imishayo yokudla
Ukuzijabulisa, amabhayisikobho, ukugembula, ukuthenga, idolobhana lamasiko
Ama-adventures angaphandle, i-zip slide, i-quad ngebhayisikili, ukugibela amahhashi nokuningi
I-Pilanesberg Game Reserve - imoto yokuhamba, ihambahamba, i-quads, i-Lion Park